Zoro ezo bara nnukwu uru Na Europe na otú Nweta E Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Zoro ezo bara nnukwu uru Na Europe na otú Nweta E Site Train
All njem nleta nrọ banyere ịga zoro bara nnukwu uru na Europe dị ka nke ọma dị ka ndị a ma ama European metropolises. A foto nke ha ji obi ụtọ guzo n'akụkụ ifflọ Elu Eiffel, Colosseum ma ọ bụ Big Ben-eme ka onye ọ bụla na-eche ahụkebe (na anyị na-kpam kpam na-na!). Ma ị bụ onye Instagram riri ahụ ma ọ bụ a "ezi" njem, aga ebe n'ụwa bụ ihe niile!
awagharị gburugburu, ịgagharị amaghị, agbalị izute ọhụrụ omenala, na ahụmahụ ihe dị iche iche mara mma. Ọ bụ ya mere ezi njem na-adịghị egwu gaba kwụsịrị ụzọ. Ha na-amasị ịkwụsị site obodo na-enweghị ọdụ ụgbọelu na-adịghị ise ọtụtụ ndị ọbịa. Ndị a na-ezo bara nnukwu uru na Europe nwere ike nke ukwuu mgbe inye a mma foto nke a akpan akpan European mba karịa ihe ọ bụla ọzọ, a ezi nghọta nke a mba. Eleta ha n'ụgbọ okporo ígwè bụ eleghị anya, ụzọ kasị mma na-enwe ọhụrụ Okirikiri na-ejegharị nke ndụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye njem, ndepụta a bụ n'ihi na ị.
Ebe a na-anyị mmasị zoro bara nnukwu uru na Europe mfe pụrụ ime eme ụgbọ okporo ígwè nke na-enweghị a doro anya kwesịrị ịhụ.
IHE: Ọ bụrụ na ị na-eche echiche aga bọs vesos aga ụgbọ okporo ígwè – oke mgbe niile kwesịrị ịbụ ụgbọ okporo ígwè.
Ọ dịghị mkpa ka ozugbo uche na oru ngo onwe gị na Dresden, n'ezie. Dresden bụ isi obodo nke Saxony, ma e nwere ụfọdụ ndị ọzọ n'akụkụ nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ German region uru banyere, oke. Dị nnọọ ná mpụga Dresden bụ Konigstein Ebe e wusiri ike. Ma ọ bụrụ na ị na-enwe na-eje ije, ị kwesịrị ị na-atụ uche stonework àkwà mmiri na Saxony National park. Ọzọkwa, mkpa ka ị-eme ihe n'eziokwu na-onwe gị. O siri ike gaa na Germany na, dịkarịa ala otu ugboro, enweghị ọtụtụ beers ụfọdụ nke Ogwe. Luckily, Saxony nwere a obere spa obodo anākpọ Bad Schandau, zuru okè n'ihi na detoxing mgbe a drunken n'abalị. Gluhwein kwesịkwara ịbụ na gị na ndepụta ebe ọ bụ n'ụlọ ka ndị kasị ochie Christmas ahịa na Germany. The German ụgbọ okporo ígwè netwọk bụ magburu onwe na mpaghara ebe a otú ị ga-esi na-enweta ya na ya kwekọrọ nnọọ.
Frankfurt na Dresden Ụgbọ oloko
Dortmund na Dresden Ụgbọ oloko
Luxembourg na Dresden Ụgbọ oloko
Amsterdam na Dresden Ụgbọ oloko
2. Luxembourg City, a obere, ihunanya Capital
Ihe mbụ ị na-eche nke mgbe ekwu okwu banyere Luxembourg bụ mmiri. The mba a maara nke ọma kpọmkwem n'ihi ha. Ma Luxembourg si steepled ụka, nkume ụlọ, na obere ọwa mmiri na-eme ka ịga leta ya na-atọ ụtọ karịa ka ị ga-atụ anya ya. Ọ bụ ya mere ebe a bụ otu n'ime obere zoro ezo bara nnukwu uru na Europe n'etiti a Afrika isi. Ọ bụ a ebe mara mma, tọrọ na ebe ndị Petrusse na Alzette osimiri izute. Ị nwere ike ịga ụfọdụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na hip Ogwe nso Central square. Ọzọkwa, ruu Philippe II nwere a ụyọkọ nke ụlọ ahịa, otú i mma-adị njikere ka na-eji a ole na ole ebu! kpam kpam Luxembourg bụ a zuru okè n'ebe maka a ihunanya izu ụka.
Koblenz na Luxembourg Ụgbọ oloko
3. Antwerp: diamonds, Bikes na More Beer
Otu ugboro ọzọ, n'ezie a zoro ezo mkpuru, ma anyị nwere banyere ya. Ihe kpatara ya dị mfe. Antwerp bụ a akwa ebe kwụsị site na gị ụgbọ okporo ígwè njem si Luxembourg na Netherlands. E wezụga, obodo a nwere ọtụtụ ihe na-enye, na ị ga-enwe fun e. Ọ bụrụ na ị na- omiiko banyere ịgba ígwè na ije ị ga-ewere na "ije tour." N'ihi nke a na jụụ map, ị nwere ike achọpụta obodo ẹkenemede na ọkacha mmasị gị ụdị njem. Ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe "shinier", gaa lelee Antwerp Home nke Diamonds. N'otu oge ahụ, Belgium dị ukwuu maka biya ndị hụrụ. Nyere na ị bụ otu, jidere a Foto Ụlọ Nga na "De Konick", na Antwerp obodo omume biya.
4. Camogli, a Ezi Zoro Ezo bara nnukwu uru na Europe
naanị 45 nkeji nke ụgbọ okporo ígwè n'ebe Genoa, a obere na-akụ azụ obodo anaghị nwere otutu nke kwesịrị-na-ahụ. Otú ọ dị, dị nnọọ ka ndị aderrated ebe na-esi na-ezi na-ezo bara nnukwu uru nke Europe, onye a kwesịkwara ịbụ na gị na ndepụta. Na ya yi ụlọ na nkpoda n'okporo ámá, Camogli bụ a zuru okè n'ebe-aga n'ihi na a ogologo ije. Eje ije site na Camogli, ị ga-achọpụta fancy hotels, ochie ụlọ, na obere bakeries. Tupu ị mara na ọ – ị ga-ada na ịhụnanya na ebe a! Na mgbe ị na-esi ike gwụrụ nke na-eje ije gburugburu, ọ dịghị ihe dị mma karịa inwe nri ehihie n'ebe ụfọdụ nke obodo ahụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. A zuru okè oge gara Camogli ga-May, n'oge azụ ememme. The isi mma nke ihe omume a bụ 28-ton pan. Ọ na-eji, i kwutere ya nri, maka nri azụ.
Florence na Camogli Ụgbọ oloko
Genoa ka Camogli Ụgbọ oloko
Rome ka Camogli Ụgbọ oloko
Milan ka Camogli Ụgbọ oloko
O siri ike na-ewere otu nke zoro ezo bara nnukwu uru na Europe mgbe i nwere dainosoo fossils gị nso. Yup, ị na-agụ ya nri. Dainosoo fossils pụrụ ịchọta tinyere Jurassic n'ụsọ oké osimiri nke Weymouth. ma, ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpebi na-a 3-hour ụgbọ okporo ígwè si London ịhụ ha. The ndị na-eme nwere ike ịnụ ụtọ dị iche iche watersports na nwere azụ na ibe na osimiri. Ma ọ bụ na-ahọrọ a nri na ụfọdụ nke gastropubs. Ebe ọ bụ na pound bụ ubé ala na oge, ọ bụ oge kwesịrị iji mee njem iji England. Na oge kwesịrị ekwesị maka ileta Weymouth ga-abụ Ọgọstụ n'oge Weymouth ngagharingosi.
Did we help with deciding which place to visit next on your upcoming adventures? Good! Ise a ebe bụ nanị otu ihe atụ nke otú e ka ụfọdụ achọpụtaghị na-ezo bara nnukwu uru na Europe. The ụwa bụ jupụtara ịtụnanya na-eche gị na-achọpụta na ha. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè ga-enye gị ohere na-ahụ ndị a ebe site na a dị iche iche n'akuku. Ọzọkwa, ị ga-enweta gị na njem ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ aka na-eme atụmatụ gị njem, ma ọ bụ na ị chọrọ ịzụta tiketi, biko gaa na anyị na SaveATrain.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#Camogli #hiddemgems #Saxony #weymouth Antwerp europetrains europetravel Luxembourg ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ